Archives momba ny fiomanana ara-batana - Countdown amin'ny fanjakana
Category Archives: Fiomanana ara-batana
(Ny fehiben'ny pretra amin'ny banga sy volomparasy volomparasy. Misy pretra afaka milaza an'io fitahiana io.) P: Ny anaranay dia amin'ny anaran'ny Tompo. R: Izay nanao ny lanitra sy ny tany.
Azafady mba tadidio ny fitandremana ara-pitsaboana sy voamarina ara-tsiantifika rehetra omena anao mba hiarovan-tena amin'ny otrikaretina, bakteria, areti-mandringana na areti-mifindra izay mety hisy fiatraikany amin'ny faritra misy anao eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra sy ny Eglizy dia tsy mampanantena velively antsika fahalalahana amin'ny aretina rehetra, ary isika tsirairay avy dia hiaina ny fofonaintsika farany […]
Tolo-kevitry ny voaloboka, tantely ary voanjo voatahy, nomena. Jesosy Kristy Tompontsika: 27 Oktobra 2014 “Tsy mahafoy anao aho. Aza adino ny mitahiry ao an-tranonareo voaloboka voatahy amin'ny anarako amin'ny fotoanan'ny mosary. "
Andriamanitra Ray: "Ny famaizana avy any an-danitra dia tsy hahatratra ny fianakaviana kristiana natokana sy arovan'ny fianakaviana masina."